Filtrer les éléments par date : mardi, 17 mars 2020
Cameroun no hampiantrano ny dingana famaranana ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika amin’ny baolina kitra amin’ireo ekipam-pirenena rafetin’ireo mpilalao tsy mila ravinahitra any ivelany. Efa voafaritry ny CAF fa tokony hatao ny 4 ka hatramin’ny 25 aprily 2020 saingy manoloana ny fihanaky ny valanaretina coronavirus dia ahemotra ho amin’ny fotoana manaraka, tsy mbola voafaritra io fifaninanana kaontinantaly io, araka ny fanambarana navoakan’ny komity mpikarakara ny CHAN, taorian’ny fivoriana tsy ara-potoana natao androany talata 17 marsa 2020.
Tsy tafita hiatrika ity dingan’ny famaranana ny CHAN 2020 ity ny Barea CHAN. Noravan’i Namibia ny nofinofin’ny Malagasy, rehefa niondrika tamin’ny isa 2 noho 0 tamin’ny lalao miverina tany Namibia na dia nandresy tamin’ny isa 1 noho 0 aza ny Barea CHAN tamin’ny lalao mandroso, lalao izay namaritra ny fahazoana tapakila ho any Cameroun.
Firenena afrikanina isany ahitana trangana coronavirus i Cameroun. Miisa folo hatramin’ity androany ity ny marary voamarina fa voan’io valanaretina io, araka ny nambaran’i Dr Manaouda Malachie, minisitry ny fahasalamana any Cameroun.
Hahatsiaro ny faha 73 taonan’ny tolom-panafahana 29 martsa 1947 i Madagasikara amin’ity taona 2020 ity. Tafiditra indrindra ao anatin’izany ity hetsika ara-tsosialy ity, izay nanaovana fizahana maimaimpoana ny fahasalaman'ireo bekotro maroholatra notarihan'ny Fitalean'ny Mpiady Tia Tanindrazana eo anivon'ny Minisiteran'ny Fiarovam-pirenena, niarahana tamin'ny Fikambanan'ny Fifanampiana Malagasy teny amin'ny "Centre de Soins et de Santé" androany talata 17 martsa 2020.
mardi, 17 mars 2020 20:37
Lakandranon'i Pangalana: Efa afaka hifamezivezena
Efa afaka hifamezivezen'ny mpitatitra an-dranomamy ny lakandranon'i Pangalana, manomboka eo Toamasina hatrany Mananjary.
Natomboka tamin’ny 14 septambra 2019 ny fanadiovana, nanesorana ireo fasika manentsina ny lakandranon'i Pangalana mba ho azo hifamezivezena.
Maherin'ny 100 taonina isan'andro ny entana mifamezivezy amin’iny Pangalana iny.
Nanolotra vary 300kg, menaka 72 tavoahangy amin'ny 1 litatra, siramamy 50 kg, kidoro spaonjy miisa 06 ary lamba firakotra 40 isa ho an’ny hopitaly Anosiala ny firenena Sinoa tamin’ny alalan’ny fikambanana « Chambre de Commerce Nantong » eto Madagasikara, hiatrehana sy hanaraha-maso ny valanaretina "Coronavirus".
mardi, 17 mars 2020 19:56
Brezila: Lehilahy iray, 62 taona, matin’ny coronavirus
Namono olona iray tany Brezila ny coronavirus. Lehilahy iray, 62 taona, iray tamin’ireo marary tao Sao Paulo ity nodimandry ity, ary io olona voalohany namoy ny ainy tao amin’ity firenena ity.
210 tapitrisa ny mponina any Brezila, 234 ny voamarina fa voan’ny coronavirus, ka ao amin’ny fanjakan’i Sao Paulo avokoa ny 152 amin’ireo.
Mampihatra ny fepetra fahamaizana (Etat d'urgence) ny any an-toerana amin’izao fotoana izao, manoloana ny fihanak’ity valanaretina ity.
mardi, 17 mars 2020 19:10
Fisorohana ny Coronavirus: Misy fitsidihana tampoka ireo olona mitoka-ponenana ivelan’ny hopitaly hanamarinana raha manaja ny toromarika izy ireo
Nanatanteraka fitsidihana tsy misy fampilazana mialoha tany an-tranon’ireo olona vao tonga avy any an-dafy nanomboka ny 16 martsa teo ny ireo ekipa ahitana solotena avy amin’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka ary koa ny Ministeran’ny Fitaterana, ny Fizahantany ary ny Famatarana ny toetrandro ho fanamafisana ny ady amin’ny fipariahan’ny valan’aretina coronavirus, covid-19.
Natao izany fitsidihana tampoka sy tsy misy fampilazana mialoha izany mba hanamarinana fa mijanona ao amin’ny toerana voalaza ao anaty taratasy ireo olona vao avy nivahiny tany an-dafy ireo, ary koa manaraka an-tsakany sy an-davany ireo toromarika rehetra nomen’ny mpitsambo teny am-pahatongavana teny amin’ny seranam-piaramanidina. Nisy mantsy taratasy nosoniavina mamaritra izany nasaina nosoniavin’ny olona tsirairay mialohan’ny niondranany hody eto an-tanindrazana.
mardi, 17 mars 2020 19:09
Ministeran’ny Tontolo iainana sy Fandrosoana Lovainjafy: Voarara ny fitrandrahana ny hazo sarobidy, miato ny fanomezan-dalana hitrandraka hazo tsotra
Mamerina ny Minisiteran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy fa mbola manankery ny Naoty lah. 01/19/MEDD/Mi tamin’ny 29 janoary 2019, milaza fa voarara ny fitrandrahana ny hazo sarobidy sokajy faharoa dia ny hazomainty (bois d’ébène), ny andramena na bois de rose, ary ny voamboana manerana an'i Madagasikara. Voarara araka izany ny fanapahana, ny famarotana, ny fitaterana ary ny fanondranana ireo hazo ireo.
Nankatoa ny fifanarahana iraisam-pirenena mifehy ny varotra iraisam-pirenena momba ny zavamananaina ahiana ho lany tamingana (CITES) i Madagasikara ka ho fanajana izany fifanarahana izany, sy ho fitandrovana ireo zavamananaina ahiana ho lany tamingana no nandraisana ny fepetra sy androsoana vahaolana hafa, ho fanatsarana ny fiveloman’ny mponina, hoy ny avy eo anivon’ny ministera.
Mahakasika ireo hazo tsotra dia miato aloha ny fitrandrahana azy ireo araka ny Naoty fampahafantarana navoakan’ny Minisitera, ary mbola manan-kery hatramin’izao. Miato ny fanomezan-dàlana hanapaka hazo, mba hiarovana ny ala tsy ho ripaka sy ho fitandroana ireo ala sisa tavela.
mardi, 17 mars 2020 18:40
Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika: Mitondra ny anjara birikiny amn’ny fisorohana amin’ny fiavian’ny coronavirus
Namory ireo sojaben’ny sampam-pianarana momba ny fitsaboana manerana ny oniversite enina eto Madagasikara i Pr Assoumacou Elia Béatrice, minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika, ny 16 martsa 2020, nandinihana ireo fepetra rehetra tokony horaisina manoloana ny fihanaky ny virus COVID-19 manerantany.
Amin’ny maha siantifika azy ireo dia manana andraikitra amin’ny fanomezana fampiofanana amin’ny tokony hatao hisorohana ny aretina, sy fampitana vaovao marina mahakasika io aretina io izy ireo.
Ny fananana ireo sampam-pianarana momba ny fitsaboana miisa enina manerana an’i Madagasikara dia efa zava-dehibe sahady ahafahana manampy ny vahoaka Malagasy, indrindra ny eny anivon’ny anjerimanontolo amin’ny fiatrehana sy fisorohana ny Coronavirus.
mardi, 17 mars 2020 17:18
Coronavirus: Misy Filankevitry ny Minisitra manokana ao Ambohitsorohitra
Mitarika Filankevitry ny Minisitra manokana ao amin’ny lapam-panjakana Ambohitsorohitra amin'izao fotoana izao ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, miaraka amin'ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta Ntsay Christian, sy Minisitra tompon'andraikitra telo ambin'ny folo ao amin'ny governemanta.
Ny mikasika ny valan'aretina coronavirus no lohahevitra lehibe horesahana mandritra izany.
Vokatry ny rivomahery sy rotsakorana nentin'ilay andro ratsy Herold farany teo, dia voa mafy indray i Maroantsetra, dibo-drano ny tanàna sy fokontany maro. Tsy afaka mianatra ireo mpianatra fa feno rano ny sekoly.
Maro ny fahavoazana ary mihoatra ny 2 000 ireo traboina miandry famonjena.
Somary takon'ilay valan'aretina Coronavirus ity loza ity, ka mitaraina ireo mponina fa mitoka-monina, ny lalana mandeha any rahateo dia lasa atao resaka fakana vatom-pifidianana fotsiny hoy ny maro.